Ungashandisa sei zvakanaka Amazon marketing zana?
Iyi pfupi shoma inopihwa kuAmazon marketing tool iyo ndiyo AMS. Zvakakosha kuti tibvunze nyaya iyi nekuda kwe "kukwikwidzana kushamwaridzana" nevatengesi vakawanda paIndaneti mumazuva edu.
Amazon Marketing Services (AMS) inopa vatengesi vemuIndaneti vane zvikomborero zvakawanda uye inovapa mukana wekumira kubva kumakwikwi avo uye kuisa maitiro avo muAmerica search results page.
Mutengesi mumwe nomumwe weAzone ane ruzivo anoziva kuti haisi kambani imwe neimwe pane zvaunogona kuita zvinoreva kutenga. Ndicho chikonzero nei zvakakosha kunzwisisa kuti ungashandisa sei Amazon marketing tool kuti uwane pfuma yakawanda kubva nayo.
Nei uchida kushandisa Amazon marketing zana?
Sezvandakambotaura pamberi peAmerica inonyanya kukwikwidzana pamusika apo vazhinji vemaikwi ako emakwikwi vari kumwe chete kubvisa, uye imi mose munopa zvakanakira zvakafanana uye mune zvimwechete zvishoma - student umzugshilfe. Mune mamwe mazwi uri kutsika mutsipa uye mutsipa nemakwikwi ako emisika uye uine mikana yakafanana yekukunda bhokisi rekutenga kuAmazon. Iko unogona kukwanisa mutengi kunogona kuvhara peji remukwikwidzi wako, uye iwe ucharasikirwa kutengeswa mune imwe nguva. Ndicho chikonzero iwe unosvika kumasekonzi gumi kuti uite kuti munhu anotsvaga kutsvaga kuti asarudze chaiyo chigadzirwa chako.
Amazon Marketing Service ichakubatsira kuti uwedzere vamwe vangave vatengi uye kuwedzera mararamiro ako kuAmazon. Uyezve, inobvumira kugadzirisa matanho kune vashandi pamatanho akasiyana ekutenga chinangwa. Inokupa iwe unyanzvi hwekutora maruva ako pamberi pevamwe vatengesi-vatengesi kuAmazon.
Musoro wekutengeswa unotora basa rekugadzira branding, zvinotsigirwa nemishonga zvinoshandiswa nevashandisi vanofarira mune chimwe chigadzirwa. Zvigadzirwa zvakadai zvinoshambadza zvinokubatsira kuti uchengetedze vatengesi mukati meAmerica yako nzvimbo yekutengesa.
Amazon Marketing Services evolved into three major Amazon advertising formats:
Zvose izvi zvikwata zvekutengeserana zvine nzvimbo yavo muAmazul conversion conversion. Inyanzvi yekutengesa inoda kuti zvose izvi zvitatu pamwe chete nemhando dzakasiyana-siyana dzekutsvaga.
Musoro wekutsvaga kutsvaga
Tsvaga yekutsvaga mitsva inowanikwa pamusoro pekutengesa. Vashanduri vanoona pane peji yekutsvaga uye vanobata zvakananga vanotsvaga kutenga chisarudzo.Vanonyanya kutsvaga mararamiro uye tsvaga yekutsvaga tsvakurudzo.Zvinyorwa zvekutsvaga kutsvaga zvinowanzoita tsika yemutauro wepamusoro uye zvimwe zvinhu zvakabatana zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvinotsvaga mazwi ekutsvaga uye zvinoshandisa zvakanakisisa dzemibvunzo yakawanda. kukupa mukana wekutaurirana nevateereri vako pavanotanga kutsvaga kwavo
Kusiyanisa kubatsirwa kwakakosha kwemashoko ekutsvaga kutsvaga kunokosha. Iwe unogamuchira mukana wokutumira makoko ako kumhando yakadaro ye URL seyomutambo URL, peji yekatsva, peji yemigumisiro yezvitsva uye peji yezvigadzirwa.
Sponsored product ads anogona kuva emhando mbiri - zvinyorwa uye zvinyorwa kutengesa kutende, asi chechipiri ndechimwe chinhu chinonyanya kushandiswa. Izvi zvinoshandiswa paTHE kana pasi pe Amazon tsvaga peji peji kana iwe ukashandisa davi uye pane chigadzirwa tsanangudzo peji paunoshandisa foni. Sponsored product ads inoonekwa sepakati-ye-the-funnel ads sezvo ichioneka pamberi pevangakwanisi vatengi kana vachienzanisa nzira dzakasiyana dzekutenga.
Izvi zvinotengeswa zvinowanikwa kwete chete kune vatengesi asiwo kune vose vatengesi vatatu vari kuAmazon. Iwe unogona kukurumidza kuvasika uye zvino zvakakurumidza kugamuchira kugamuchirwa.
Iyi purogiramu yekudhinda yakafanana neGoogle kutenga sezvo zviziviso zvechimwe chigadzirwa. Uyezve, maAmazon anofungawo nezvehutano hwechigadzirwa chako kumubvunzo wemushandisi, purogiramu yako yekutengesa, maongororo, uye mutengo wekutengesa.
Zvakanakisisa zvayo ndechokuti iwe unogona kusarudza pakati pemhando yekutsvaga uye yekunyora mabhuku..Paunotanga mvumo yako pakarepo, Amazon inoshandisa ruzivo rune ruzivo kuti rwufananidze chigadzirwa chako chekutsvaga nemashoko anotsvaga kutsvaga. Mune mhaka kana iwe wakamhanyira kutengesa kwako manyore, unogona kuisa mazita emitsva yekutsvaga yaunogona kutarisa mazvigadzirwa zvekugadzirwa kwako. Mushandirapamwe wekanyorwa ane mari yakakwirira pane imwe chete, asi kupa mazano ekutarisira zviri nani, apo mishandirapamwe inoshandiswa inogona kugadziriswa nyore nyore uye inowanikwa pane yakawanda yevanotsvaga.
Handikwanisi kuvhota kana yekutengesa zvigadzirwa zvemhando. Izvo zvose zvinobatsira bhizinesi renyu, saka ndinokurudzira zvakasimba kuti ndivashandise mune zvakaoma.
Pakati pezvinhu zvinokosha zveAmazon Sponsored Products, tinogona kusiyanisa zvinotevera:
Anoshanda maAlex account yevatengesi account;
Unyanzvi hwokuendesa kune dzose adhiresi munharaunda yeUnited States;
Zvishandiso zvekushandisa kwako zvinofanira kunge zvichibva kune dzinoverengeka dziripo;
Yako inofanira kutengesa zvinhu zvitsva uye zvepakutanga;
Chikwata chako chinofanira kugadzirirwa chete nokuda kwekutsvaga kunowanikwa kwebhokisi rekutenga. Kana zvisina kudaro, chikwata chako hachizogoni kuonekwa kune vangave vatengi vako kuAmazon.
Unofanira kutengesa zvinhu zvako mune imwe yenyika dzinotevera - US, UK, Canada, Germany, France, Spain, Italy, uye China.
Zviratidzo zvinoratidza matanho
Zviratidzo zvinowanikwa zvikamu zvinowanikwa pasi pezvese zvekutsvaga uye zvinoratidzwa chete pamashizha emichero. Iyo ndiyo mukana wako wokupedzisira kuveresa vashandi vako vanogona kutenga.
Mhando iyi yezvivako inogona kutaridzirwa nemhando yezvakagadzirwa nemutengi achange atenga kana nekunaka kwake kana yapfuura. Chirongwa chekugadzirisa chinokupa mukana wekutarisa mapeji mapiji aunoda kuti mvumo yako iiswe. Semuenzaniso, unogona kuratidza zvinhu zvako pamapeji ako emakambani ekukwikwidza, kupa Amazon tsvakurudzo nezvinhu zvakakwana pamutengo wakakodzera. Zvisinei, zvakakosha kutaura kuti chigadziro chinogadzirisa chakakosha zvakadzika sezvaunoda kusarudza zvinhu zvaunoda kuti matanho ako aonekwe.
Mumaawa ayo, kufungidzirwa kwechido kunogona kuvhara nzvimbo yakawanda asi zvishoma nezvishoma. Kushandisa rudzi urwu rwekutengesa unogona kuratidza zvinhu zvako zvevashandisi vanoona imwe nzvimbo yezvigadzirwa kana zvimwe zvinhu zvakabatana mukati memunhu mumwe chete.